आड भए कस्तो हुन्थ्यो
हरेकको छातिमा अग्लो पहाड भए कस्तो हुन्थ्यो?
कुनै शिर झुक्न नदिने ढाड भए कस्तो हुन्थ्यो?
झन् विलाउँदै गैरहेछ यो आवाज देशभित्र,
'भोटो चल्थ्यो तर नयाँ कछाड भए कस्तो हुन्थ्यो?'
जायज होलान् देशसँग आफ्नो हक माग्नेहरु,
तर देशलाई पनि तिन्को आड भए कस्तो हुन्थ्यो?
सडकमाझ भोकासँग म नि उभिएको हुन्थें,
बाटो छेक्दा मानो चामल जुगाड भए कस्तो हुन्थ्यो?
तिम्रो मेरो यस्को उस्को आफ्नै आफ्नै पर्वहरु,
देशको पनि कुनै यौटा चाड भए कस्तो हुन्थ्यो?